Mahantra tanteraka ny Malagasy. Ekena fa misy ny harena voajanahary saingy tsy ara-drariny ny fizarana azy ka tsy mahazo tombon-tsoa ny ankamaroan'ny mponina fa lasan'ireo lazaina ho mahitahita ny tombony rehetra. Raha ny fanondranana ireo hazo sarobidy dia azo ambara fa mahfaka an'i Madagasikara amin'ny tsy fahampiana sy ny hanohanana ny vola voaangona amin'izany. Tsy izay no misy satria ireo mpandraharana sy ireo olona ambony manoma alalana amoahana ireo hazo mankany ivelany no mipaingotra ny vola rehetra.
Misy ankehitriny ny fibabababan'ny olom-boatendry ao amin'ny CT sy CST amin'ny fitakiana ny tamin-karama. Moa ve tena miasa ireo olona ireo? Sao dia milalao tanana fotsiny ao am-pivoriana na resin-tory ka tsy mahalala izay tena hanampiana ny vahoaka? Lany vola fotsiny ny fitondrana manakarama ireo olona ireo kanefa tsy misy fihatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka. Hay moa ka ireo zanaka CT sy CST efa zatra nandeha fiara fitateram-bahoaka no efa manana fiara ankehitriny ka tsy maintsy iantohana ny solika ampiasainy. Raha manao toy izany avokoa ny vady aman-janaky ny CT sy CST dia mihinana ny tsy fihinana ny vahoaka.
Moa ve efa mba nisy nanisa ireo olona manan-katao manangana trano mijoalajoala, ireo manana fiara mihoatra ny telo sy ireo mazoto mivoaka any ivelany? Raha mba anombinana kely fotsiny ny zavatra ananany ka omeny ny tsy manana dia azo antoka fa afa-pahasahiranana ny saramba be. Mbola ho lavitra ezaka izany satria maro ireo olona tia mandanilany foana, tsy manaiky raha tsy manao tsena eny amin'ny fivarotana lehibe ka malaina ny hisahirana hitingitingina hividy voatabia. Aleony misonanika amin'ny sakafo am-by fotsy sy mangatsiaka toy izay hahandro sy hamindro amin'ny afon'arina.
Tsetsatsetsa tsy aritra ihany no hilazana izany fa raha misy azonao atao, manaova na dia kely aza satria maro ireo olona tsy manana na dia tapa-panjaitra aza kanefa mamelon-janaka. Na izany aza, ampinaro izy hiahy ny tenany, tsy ho kamo satria aleo manolotra harato sy vovo toy izay trondro avy hatrany.